Indondo imenze waba nokuzethemba - Ilanga News
Home Izindaba Indondo imenze waba nokuzethemba
Indondo imenze waba nokuzethemba
UZimdollar uthi usezoya nakwezinye izinhlolokhono ngokukhululeka
UKUHLABANA ngendo-ndo yeBest Actress kwiSimon Mabhunu Sabela Film and TV Awards ebiseThe Playhouse, eThekwini, ngeledlule, kunike isilomo somsa-kazi woKhozi FM, uZimiphi “Zimdollar” Biyela, ukuzethemba kwezokulingisa.
Lo msakazi, ongaconsi kubalaleli boKhozi, ikakhulukazi abatha-ndi bomculo wesintu, uhlabane ngale ndondo ngendawo kaFortunate – okungowesifazane onolaka, obeneshwa lokushonelwa ngu-myeni wakhe – abeyilingisa emdla-lweni kamabonakude, iHostela, obukhonjiswa kuMzansi Magic (channel 161) njalo ngeSonto.
Ubonge kakhulu kubakhiqizi balo mdlalo, iStained Glass, ngo-kumethemba, bamnika ithuba lokuzibonakalisa. Yize egile izimanga elingisa kwiHostela, uZimdollar akethuki isisinga kwezokulingisa njengoba eke wakho-mbisa ngethalente lakhe nase-mdlalweni owuchungechunge, Uzalo, odlala kuSABC 1 ngo-20h30 ngoMsombuluko kuya kuLwesi-hlanu.
Nalo Uzalo lukhiqizwa yiStai-ned Glass.
Ekhuluma neLANGA ngokuhlo-mula ngale ndondo, uZimdollar uthe kumenza abe nokuzigqaja nokuzethemba kulo mkhakha njengoba enqobe emunxeni abebanga kuwona nabalingisi abahlonishwayo.
“Ngikholwa wukuthi kukhona okubonwe ngabakhiqizi beHostela kimina ngoba ngisho inhlolokhono kangiyenzanga, bangitshele nje ukuthi bafisa ngidlale kulo mdlalo. Kusho lukhulu-ke kimina ukukhethwa eminxeni okukhona kuyona abalingisi abangaconsi phansi kuleli njengoNomzamo Mbatha noThandeka Dawn-King,” kusho yena.
Uthi ukuklonyeliswa kulo mci-mbi ohlonipha amaciko KwaZulu-Natal, kusho lukhulu kuyena ngoba uyothi noma esehlabana ngaphandle, abe azi ukuthi nasekhaya ithalente lakhe liyaziwa.
“Kuliqiniso ukuthi kunamaciko ahamba aze ayohlomula ngezindo-ndo ngaphandle, amanye aze ahlo-mule ngeGrammy Award kodwa ekhaya engakaze athole lutho. Lokhu kungenza ngithobeke kakhulu,” kusho yena.
Uthi manje usezoke abhukule ayokwenza inhlokokhono nakwe-minye imidlalo.
Le ntokazi isakaza uhlelo oluthandwa kakhulu ngabalandeli bakamaskandi, uSigiya Ngengoma, ngokubambisana noKhathide “Tshathugodo” Ngobe, odume kwabanye abathandi boKhozi ngeSipheshethwa.
Iqale ukungena emkhakheni wezikaqedisizungu enkampanini kaMbongeni Ngema, iCommitted Artists, ilingisa emidlalweni yeshashalazi, icula futhi idansa.
I-Stained Glass ihambe nezindo-ndo eziwu-5 kulo mcimbi wezindo-ndo – okuhlabane kuwona uZimdollar – njengoba noWiseman Mncube ethathe eyeBest Actor, uBheki Sibiya wathatha eyeBest Supporting Actor, uNoxolo Mathula wamuka neyeBest Supporting Acress kwathi uThobani Nzuza wagoduka neyeBest Newcomer.
Emkhakheni wezamafilimu, uSibongiseni Shezi ube yiBest Actress ngefilimu iRun, iBest Supporting Actor yathathwa nguPranesh Maharaj nge-3 Days to Go, iBest Director ithathwe ngu-Eubulus Timothy ngeDeep End, iBest Screenplay yathathwa nguSans Moonsamy noKeru Kisten ngefili-mu iRed Room, iBest Micro-Budge Feature Film ithathwe yiLangeli-hle Productions ngeMajuba.
Previous articleKuthunjwe owesifazane befuna ‘eyefa’
Next articleUcasulwe yisenzo sabalandeli beChiefs